ကားလို့စ် Ruiz Zafónမှ "ဝိညာဏ၏အာကာသစခန်း" ကိုနိုဝင်ဘာလတွင်ရောင်းချမည် eReaders အားလုံး
Carlos Ruiz Zafón၏“ ၀ ိညာဉ်၏စကြဝTheာ” သည်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
ကားလို့စ် Ruiz Zafon သူသည်စပိန်တွင်သာမကကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိလူကြိုက်အများဆုံးစာရေးဆရာများတွင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ့ဝတ္ထုကြောင့်သူလူသိများလာသည် လေရဲ့အရိပ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်သူသည်ရောင်းအားကောင်းလောက်သောအရောင်းရဆုံးကိန်းဂဏန်းများကိုရရှိခဲ့ပြီးစာအုပ် ၄ အုပ်ပါသည့်အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်းကိုစတင်ခဲ့သည် မေ့လျော့စာအုပ်များ၏သင်္ချိုင်း အရာယခု၏ထုတ်ဝေနှင့်အတူအထှတျအထိပါလိမ့်မယ် ဝိညာဉျ၏လိမ်လည်မှု.
အဆိုပါ Planeta ထုတ်ဝေအိမ်သည်ကြောင်းနောက်ဆုံးနာရီအတွင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် အသစ်ဝတ္ထုကိုနိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်မည်, ၎င်းသည်စပိန်လက်တင်အမေရိကတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Zafónကိုယ်တိုင်မက္ကဆီကိုရှိ Guadalajara International Book Fair (FIL) တွင်ပြသမည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဤရေပန်းစားသော Saga ကိုစတင်ခဲ့သည် လေရဲ့အရိပ်, အမျိုးမျိုးသောခေတ်၏ Gothic နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဘာစီလိုနာအတွက်ကြွင်းသောအရာကဲ့သို့သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့နောက်သူနှင့်အတူလိုက်ကြ၏ ကောင်းကင်တမန်၏ဂိမ်း 2008 ခုနှစ်နှင့် ကောင်းကင်အကျဉ်းသား ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ယခုစက်ဝိုင်းသည် The Labyrinth of Spirits နှင့်အတူနိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ပိတ်လိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင်စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များလုံးဝမထုတ်ပြန်နိုင်သေးပါ၊ ၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကားလို့စ်ရူဇ်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိနိုင်ရန်အချိန်နှင့်နေ့ရက်များကုန်လွန်သွားရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်။ ငါတို့အများစုပြီးသားမျှော်လင့်ကြောင်းZafón။
သငျသညျ၏ Saga ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာဖတ်ခြင်းပြီးနောက်ဝိညာဉ်၏ Labyrinth ၏ထွက်ပေါက်ထွက်စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်သောသူတို့ထဲကတ ဦး လား မေ့လျော့စာအုပ်များ၏သင်္ချိုင်း?.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » Carlos Ruiz Zafón၏“ ၀ ိညာဉ်၏စကြဝTheာ” သည်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Sony က FES Watch U ကို E-ink display နှင့်ကြေငြာခဲ့သည်
Metro Reads သို့မဟုတ် New York Metro သည်၎င်း၏ခရီးသည်များအား ebook များမည်သို့ကမ်းလှမ်းသည်